Imigaqo kunye noxanduva-iSichuan Junling Technology Co, Ltd
Val Ixabiso, isimilo nokuziphatha kwethu
Ngokujonga ngononophelo kunye nokufunda ngemikhwa ephilayo yezilwanyana zasekhaya kunye nethuku lezilwanyana, uJun Ling uvelisa iimveliso zokukhusela ngcono izilwanyana zasekhaya, kwaye kwangaxeshanye, inefuthe elihle kubanini bezilwanyana.
Comm Ukuzibophelela kwethu kubaThengi
UJunling uzibophelele kukugqwesa kuyo yonke into esifuna ukuyenza. Sijonge ukwenza ushishino ngendlela engaguquguqukiyo neselubala kunye nomthengi wethu kwaye asibambi mali kwizabelo zabathengi bethu. Abathengi babeka ukuthembela okukhulu kuthi, ngakumbi xa kufikwa ekuphatheni ulwazi oluyimfihlo noluyimfihlo. Isidima sethu sokunyaniseka kunye nokusebenza ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni nasekugcineni le ntembeko
◆ Indlela yokuziphatha
IKhowudi yeenqobo zokuziphatha kunye neepolisi zeJunling zisebenza kubo bonke abalawuli beJunling, amagosa, kunye nabasebenzi benkampani. Ziyilelwe ukunceda umqeshwa ngamnye ukuba aphathe iimeko zeshishini ngokufanelekileyo nangobulungisa.
Ance Ulawulo lwequmrhu
UJunling uzibophelele ekuthobeleni imigaqo-nkqubo evakalayo yolawulo lwendibaniselwano kwaye uthathe iinkqubo zolawulo lwendibaniselwano
◆ Uxanduva lwaBantu, uLuntu kunye neNdalo
Namhlanje "uxanduva lwentlalo yoluntu" yeyona milomo ishushu kwihlabathi liphela. Ukusukela ekusekweni kwenkampani kwi-2015, kuJunling uxanduva lwabantu kunye nendalo esingqongileyo idlale eyona ndima ibaluleke kakhulu, eyayihlala ikhathaza kakhulu umsunguli wenkampani yethu.